Biyo qabow neon shiinaha ah | Kalluunka
Shiinaha biyo qabow neon
Rosa Sanches | | Aquarium biyo qabow
Kalluunka neon shiino ahIn kasta oo ay noo horseedayso inaan u maleyno inay tahay biyo kulul, waa nooc biyo qabow ah. Waa run inay awoodaan la qabooji biyaha dhexdhexaadka ah. Heerkulka udhaxeeya 16 ilaa 24 And C. Iyo PH ee, inta udhaxeysa 6 iyo 8. Uma baahna aquarium weyn maadaama ay yihiin kalluun aad u yar.
Ahaanshaha a kalluunka gregarious, waa inuu ku jiraa quraaradda quraaradda leh tijaabooyin badan oo isku nooc ahinta u dhexeysa 6 iyo 10 waxay ku filnaan laheyd quraaradda dhexdhexaadka ah. Weligaa keligaa ha uga tegin. Kalluunka neoniska ah ee Shiinaha ee aan la-hawlgalayaashu lahayn wuxuu leeyahay dabeecado qariib ah waxayna la kulmaan cudurro ku dhaca marka ay keli dareemaan.
Kama badna 4 sentimitir. Waxay la noolaan karaan kalluunka kale ee biyaha qabow. Gaar ahaan la kalluun dahab ah. In kasta oo ay tahay in maanka lagu hayo in aysan weynayn maxaa yeelay dhibbanayaasha ayaa dhibaatooyin la kulmi kara.
Waa muhiim in la siiyo geedo fara badan quraaradda dhexdeeda si ay u dareemaan in laga ilaaliyo inay ka baxsadaan ama ka dhuuntaan kalluunka kale. Waxay yihiin dabaal aad u firfircoon. Waa kalluun aad u adkeysi badan. In kasta oo aysan xor ka ahayn cudurrada gaar ahaan laga soo qaado walaaca. Waxay aad ugu nugul yihiin cudurka baraha leh.
Neon shiine waa a noocyo aad u qurxan oo qurxin leh taas oo midab badan siisa quraaradda. Waa wax-kasta, sidaa darteed cunnadeedu waxay ka koobnaan karaan cunnooyin gebi ahaanba budo ah. Aqbal cayayaanka, cyclops daphnia, iyo shrimp brine ahaan cunto waqti ka waqti.
Ku saabsan soo-saariddiisa, waa mid cufan. Magac ahaan maxkamadaha labka dhadig. Waxay ku dhasheen dhirta ugxantiina waxay dillaaceen 36-48 saacadood ka dib markay jiifeen. Intaa kadib waa inaad u qaadataa kalluunka aquarium kale. Laba maalmood ka dib markay dillaacdo, neecooyinka ayaa gebi ahaanba madaxbannaan oo waxay awood u yeelan doonaan inay dabbaalaan dhibaato la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Shiinaha biyo qabow neon
Cunto siinta kalluunka